News Archives - Page 10 of 336 - Myanmar Fire Services Department
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ သံလျှက်မှော်အနောက်ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၄၀၅-A)၊ အုတ်ကျင်းရပ်တွင် နေအိမ်� ....
editor | Dec 24, 2020 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၁ ၃၅ အချိန်ခန့်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ သံလျှက်မှော်အနောက်ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၄၀၅-A)၊ အုတ်ကျင်းရပ်နေ ပိုင်ရှင် ဦးဟိန်းထက်အောင် ၏ (၂၅x၄၀)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်(၂)ထပ် “ကျေိာက်တိုင်မိုမို” ဝေဖာလုပ်ငန်းတွင်...
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်၊ ချောင်းတောင်ကျေးရွာ၊ အကွက်(၁)ရှိ နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၁ ၂၀ အချိန်ခန့်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ ရေးမြို့နယ်၊ ချောင်းတောင်ကျေးရွာ၊ အကွက်(၁)ရှိ ပိုင်ရှင် ဦးဥက္ကာဇော်၏ (၁၀x၁၅)ပေ၊ ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ မြေစိုက်(၁)ထပ် လူနေအိမ်ရှိ မီးဖိုမီးကြွင်း မီးကျန်မှ တစ်ဆင့် အနီးရှိ ကာရံထားသော...
A truck hit the house at the Maharaungmyay township, Mandalay region
editor | Dec 22, 2020 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
On Dec 21 2020, at about 06 10,aDonfeng six wheel truck carrying the sand accidently hitahouse (10’x10′) while the driver was reversing the truck and the vehicle was out of control and the brake had failed. The accident happened at the Thanlyatmhaw...
Car fire on the Yangon-Pyay road, Lanmataw township, Yangon region
editor | Dec 22, 2020 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
On Dec 21 2020,aHyndai Grand Starex black car caught fire due the electrical failure of the wiring system from the engine compartment on the Yangon-Pyay road, No 12 ward, Lanmataw township, Yangon. At 11 38, FSD received the call and dispatched the fire firefighters...
Warehouse fire at the Lashio township, Shan state
On Dec 21 2020,afire occurred at the warehouse owned by U Aung Ko Win located at the Shwewah street, Zone 4, No6ward, Laship township, Shan state. It was investigated that the fire started from the cigarette and the spark from the cigarette spread to the mat,...
Residential fire in Thanlyin township, Yangon
editor | Dec 21, 2020 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
On Dec 20 2020, at about 13 37, house fire occurred at theastorey house (18’x 30′) galvanized steel coil roofing in the upper Thanlyin township, Yangon region. The fire started from the overheated electric kettle and spread to the wall near the kettle and the fire...
Page 10 of 336« « Previous...89101112...203040...Next »